ज्ञानेन्द्र शाहिले आबेगमा आएर मर्यादा बिर्सेछन् ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
ज्ञानेन्द्र शाहिले आबेगमा आएर मर्यादा बिर्सेछन् !
२०७६ भाद्र २९ गते आइतवार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईमाथि नेपालगन्ज विमानस्थलमा विमानभित्रै गालीगलौज भएपछि कलाकारहरुले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । काठमाडौँ आउने विमानलाई मन्त्रीले कुराएर सास्ती दिएको भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीको टोलीले मन्त्रीमाथि हप्कीदप्की गरेको भिडियो शाहिले नै सार्वजनिक गरेका थिए । मन्त्रीलाई युवाहरुको हुलले गालीगलौज गरिरहेको बेला मन्त्री भने चुपचाप बसेका थिए । उनले समाजिक संञ्जालमा आफू विमानस्थलमा आइपुग्न १५ मिनेट ढिलो भएको स्विकारेका छन् । उनले यात्रुमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमायाचना पनि गरेका छन् । यसैबिच कलाकारले यो घट्नालाई लिएर समाजिक संजालमा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
हाँस्यकलाकारद्वय मनोज गजुरेल र केदारनाथ घिमिरे माग्ने बुढाले समाजिक संजालमा प्रतिक्रिया दिदैँ योगेशले बुद्धत्व प्राप्त गरेको बताएका छन् । घिमिरेले लेखेका छन्, बुद्ध एयरमा योगेशले बुद्धत्व प्राप्त गरेछन्, आफ्नो गल्ती महसुस गरेर गालि गर्दापनि हांसेरै बसेछन् । ज्ञानेन्द्र शाहिले बढि आबेगमा आएर मर्यादा बिर्सेछन् ।
हाउजाजले कहिले हामिलाई पर्खिन्छ।कहिले हामिले पर्खिनुपर्छ । चलेको चलन। अब योगेशले सधैँ समयको ख्याल गर्नुहुनेछ र यसरी नम्बर घटाउने काम गर्नुहुनेछैन भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।
त्यसैगरि, मनोज गजुरेलले, भिआईपिहरुको कारण जनताले दुःख पाउनु कदापि राम्रो होईन । त्यसमाथि नेता, मन्त्री जस्तो संबेदनशिल पदमा बस्नेले यस्ता बिषयमा धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्दछ नत्र जनताले प्रतिकार गछन् । तर, दुःख दिनु नियत हो वा परिस्थितिजन्य बाध्यता हो, छुट्याउन पनि सक्नुपर्छ । आश लाग्दा नेता तथा माननीय पर्यटन मंन्त्री योगेश भट्टराई प्रतिको दुर्ब्यबहार ज्यादै दुस्खद छ ।
सदाचार र सुशासनको वकालत गर्नेहरु पहिला आफु शिष्ट हुनुपर्छ । बिरोध, प्रतिकारको शैली अराजक, हिंसक र अमर्या्दित हुनुहुन्न । यस्तो अभद्रताले कानुनी राज्य र सभ्य समाजको खिल्ली उडाउंछ । यस्तो संस्कारले नेता, मंन्त्रीमात्र होईन, भोली जो पनि अपमानित, अपहेलित त असुरक्षित हुने अवस्था आउन सक्छ । नेता, मन्त्री, अभियन्ता, नागरिक सबैले बानी सुधारौं, हाम्रो देश र हामी जनताको भलो त्यसैमा छ । भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।